EVY's Kitchen: မွှေစက်မသုံးတဲ့ စတော်ဘယ်ရီကိတ်
ဒါတွေချည်းပဲထပ်ကာထပ်ကာလုပ်နေတာပဲလို့တော့ ထင်ကြတော့မယ်။ ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါရဲ့ ခုတစ်လောမုန့်တွေပြန်လုပ်ဖြစ်နေတယ်။ အိမ်က အိမ်ဦးနတ်ကြီးက ခရီးသွားတာ ပြန်မရောက်သေးတော့ ဟင်းလည်း မချက်ဖြစ်၊ ထမင်းလဲမချက်ဖြစ်နဲ့ အားတာနဲ့ စိတ်ထဲပေါ်သမျှမုန့်ကို ထလုပ်တော့တာ။ ဖြစ်ချင်တော့ စိတ်ထဲဆက်တိုက်ပေါ်တာက butter cake ဖြစ်နေတယ်။ မုန့်လုပ်တဲ့ အချိန်တွေကလည်း ညဘက်ကြီးတွေ၊ ၈နာရီ တစ်ခါတစ်လေလဲ ည၉နာရီလောက်။ တခြားအလုပ်ကိစ္စတွေရှိနေပေမယ့်လို့ မုန့်မလုပ်ရရင်ကို မနေနိုင်တော့လည်း ပင်ပန်းတဲ့ကြားကနေလုပ်ဖြစ်နေတော့တာ။
ဒီတစ်ခါလည်း လုပ်နေကျ အတိုင်းအဆကို ထက်ဝက်ဝက်လိုက်တယ်။ ဒါတွေသာ အကုန်စားရရင်လဲ မချောင်ဘူးလေ။ ချထားသောဝိတ်ကလေး အမြန်နှုံးနဲ့ ပြန်တက်သွားမှာစိုးလို့ မုန့်အချိုးအစားကို လျော့၊ ဖုတ်ပြီးသားမုန့်ကို ၅ ရက်လောက်စားနဲ့ ဟုတ်နေတာပဲ။ နဂိုထဲက ၀ချင်ရက်လက်တို့ လို့တောင်ပြောရမလိုပဲ ရေသောက်ပြီးတောင် ၀ရင် ၀နေတာမျိုးလေ။ ၀လာရင်လဲ နေရထိုင်ရက ကျပ်ပြီးစိတ်ကတယ်မရှည်ချင်လှဘူး။
အဲလောက်ကြောက်နေတဲ့ကြားထဲက ကြောက်ကြောက်နဲ့လုပ်ထားသောမုန့် :D ။ ပမာဏကို ထိန်းလို့ရအောင်လို့ သေးသေးလေးတွေလုပ်လိုက်တယ်။ တစ်ခါစား ၂ ခု။ စတော်ဘယ်ရီမုန့် ဖြစ်သွားရခြင်း အကြောင်းကတော့ ဟိုတစ်လောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အိမ်လာလည်ရင်းနဲ့ ၀ယ်လာတဲ့ စတော်ဘယ်ရီတွေပိုနေတာ ဒီ့ထက်ကြာရင် ပျက်တော့မယ်။ အဲဒီတော့ waste management ပေါ့လေ စတော်ဘယ်ရီကို နွားနို့နဲ့ရောပြီး ချေထည့်လိုက်တော့ စတော်ဘယ်ရီကိတ်ပေါ့။ ဒီတစ်ခါတော့ ပမာဏနည်းတော့ စက်မသုံးပဲ လက်သုံးပြီးမွှေပါတယ်။ တော်တော်တော့ မွှေလိုက်ရတယ်။ အိမ်မှာ မွှေစက်မရှိသေးတဲ့ သူများ လိုက်လုပ်လို့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
လုပ်နည်း (ကိတ်မုန့် သေးသေးလေး ၈ခုနဲ့ mini pound ကိတ် ခပ်ပြားပြားလေးတစ်ခုစာရပါတယ်)
သကြား ၆၅ ဂရမ်
နွားနို့် ၂၅ မီလီလီတာ
စတော်ဘယ်ရီ ၄၊ ၅ လုံးကိုချေပြီး ခုနကနွားနို့ထဲရောမွှေထားလိုက်ပါ။
ပထမဆုံး သကြားနဲ့ ထောပတ် (အခန်းအပူချိန် ခပ်ပျော့ပျော့) ကို ပွလာအောင် မွှေတံလေးနဲ့ မွှေပေးပါ
ခုနကဂျုံအရောကို ၂ ခါခွဲပြီး ထည့်မွှေပေးရပါမယ်
ပထမဆုံးဂျုံကို ထည့်ပြီးရင် နွားနို့ကို ထည့်မွှေပါ။ ပြီးမှ ကျန်တဲ့ဂျုံကို တစ်ခါထပ်ထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပါ။
လိုချင်တဲ့ ပုံစံခွက်လေးထဲထည့်ပြီး ၁၇၀ အာဗင်မှာ မိနစ် ၂၅ မိနစ်လောက်ဖုတ်ရင်ရပါပြီ။
Posted by Evy at 2:01 PM
စားချင်စရာလေး စတော်ကလဲအကြိုက်ဆိုတော့ လုပ်နည်းလဲမှတ်သွားတယ် စားလည်းစားသွားတယ် ..။
ဒီကတော့ မုန့်ကို မဖုတ်တတ်တာ...
မုန့် မဖုတ်ဖြစ်တာကြာပြီ။ ဒါလေးတော့စမ်းကြည့်အုံးမယ်။
aye tint young said...
i like it .i'lltry.thanks
Sis ..what type of butter and milk should I use for the butter cake?
Hello, you can use "Fairprice creamy butter"....That one is not bad....Or you can use SCS butter, that's the best butter I've ever used. Butalittle pricy compared to the one I mentioned earlier..